Erolin - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Erolin
Generic Name: Erolin Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Erolin ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Erolinကို hay fever ခေါ် လေထုထဲက ဝတ်မှုန်၊ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ လေထုထဲက အခြားအရာဝတ္ထုတွေကိုဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှုဖြစ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးနဲ့ အခြားသောဓါတ်မတည့်ရောဂါတွေရဲ့ (နှာချေခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ မျက်လုံး၊ နှုတ်ခေါင်း၊ လည်ချောင်းယားယံခြင်းစတဲ့) လက္ခဏာများယာယီသက်သာစေဖို့ အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။ အင်ပြင်ထပြီးယားယံနီရဲခြင်းကိုကုသရာမှာလည်း ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Eugicaကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းအစာနဲ့တွဲပြီးဖြစ်စေ ခြားပြီးဖြစ်စေသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ အချိုးအစားအတိုင်းတိတိကျကျ လိုက်နာသောက်သုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Erolinကိုအခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Erolinကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Erolinဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Erolinကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Erolin အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Erolinသို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ ရှိခြင်း
Phenylketonuria ခေါ် မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည့်ရောဂါရှိခြင်း – ဒီရောဂါရှိသူတွေဟာဉာဏ်ရည်ချို့တဲ့မှုမှကာကွယ်ဖို့ အထူးစီစဉ်ထားတဲ့ အစားအသောက်ပုံစံအတိုင်းလိုက်နာစားသုံးဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် aspartame အမည်ရှိ phenylalanine အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးပါဝင်တဲ့ သောက်ဆေးအမျိုးအစားတွေကိုလည်းအသုံးမပြုမိဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Erolin ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Erolin ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Erolinအသုံးပြုပြီးခန္ဓါကိုယ်မှာအင်ပြင်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းတို့ရောင်ရမ်းခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်စည်းချက်မမှန်ခြင်း၊ သတိလစ်မလိုခံစားရခြင်း၊ မျက်လုံးဝါခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ တက်ခြင်းစတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းသင့်ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။
Erolinရဲ့ ပြင်းထန်မှုနည်းတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ အာခြောက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အသံသြခြင်း၊ မျက်လုံးနီခြင်း၊ အမြင်အာရုံေဝဝါးခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း၊ အရေပြားမှာအဖုအပိမ့်အနီကွက်များထွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Erolin နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Erolinဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Erolin နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Erolin က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Erolin နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Erolinဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Erolin ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် နှာရည်ယို၊ နှာပိတ်၊ နှာချေခြင်းအတွက် – ၁၀ မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့ ၁ကြိမ်
ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် အရေပြားပေါ်တွင် အနီရောင်အပိမ့်များထွက်ခြင်းအတွက် – ၁၀ မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့ ၁ကြိမ်
ကလေးတွေအတွက် Erolin ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် နှာရည်ယို၊ နှာပိတ်၊ နှာချေခြင်းအတွက်
အသက် ၂နှစ်မှ ၅နှစ်အထိကလေးငယ်များ – ဆေးရည် ၅မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့ ၁ကြိမ်
အသက် ၆နှစ်နှင့်ထက် ကလေးငယ်များ – ဆေးပြားသို့မဟုတ် ဆေးတောင့် ၁၀ မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့ ၁ကြိမ်
ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် အရေပြားပေါ်တွင် အနီရောင်အပိမ့်များထွက်ခြင်းအတွက်
အသက် ၂နှစ်မှ ၅နှစ်အထိကလေးငယ်များ – ဆေးရည် ၅ မီလီဂရမ်၊ တစ်နေ့ ၁ကြိမ်
Erolinကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 24, 2019
နှာချေချင်တာအောင့်လိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်
ကျန်းမာရေးအားလုံး, ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ, ကျန်းမာရေးစင်တာ
Deviated Nasal Septum (နှာနုရိုးနေရာလွဲခြင်း )
နှာချေခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအချက်များ